Thursday May 21, 2020 - 10:58:15 in Wararka by Burco Staf
"Waxaan qaadanayay muddo hal toddobaad iyo bar ah hadda waan joogaa, wali halkaan ayaan joogaa," ayuu yiri.
Mar la waydiiyay isniintii madaxweyne Trump,faaiidada dawadaan ayuu ku jawaabay: " waan tan caddeynteeda oo ah waxaan ka helay wax tar badan."
Maxay Shiinuhu sameyeen islamarkii uu ka dilaacay Corona?
Laakiin Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay in dadka qaar ay si iskood ah u isticmaalayaan ayna dhibaato weyn kala kulmayaan.
Dr Rick Bright, oo bishii April laga qaaday xilkii uu hayay ee hoggaaminta howlaha soo saarista tallaalka, ayaa sheegay in tallaabada uu madaxweyne Trump xoogga ku saarayo dawadan "ay shaqada ka mashquulineyso tobannaan seynisyahan oo hoostaga laamaha dowladda federaalka".